Céline Marie Claudette Dion (Quebec, 30 maarso 1968) waa fanaanad oo Kanada ah. Céline Marie Claudette Dion CC OQ ChLD (/ diːɒn /;  Faransiiska: [selin djɔ]; dhashay 30 Maarso 1968) waa codka Canadian. Wuxuu ku dhashay qoys ballaadhan oo ka soo jeeda Charlemagne, Quebec, Dion wuxuu u soo muuqday xiddig da'yar oo ku nool dhulkeedii hooyadeed waxaana la socday albumyo badan oo Faransiis ah intii lagu jiray 1980-yadii. Dion waxay markii hore heshay aqoonsi caalami ah iyada oo ku guulaysatay labadii sanno ee 1986-kii Yamaha World Song Song iyo 1988 Eurovision Song Contest halkaasoo ay ka timid Switzerland. Kadib barashada Ingiriisiga, waxay ku saxiixday Diiwaanka Epic ee Maraykanka. Sanadkii 1990, Dion wuxuu sii daayay albaabkii ugu horeeyay ee Ingiriisi ah, Unison, isaga oo u abuuray inay tahay fanaan caan ah oo ku nool Waqooyiga Ameerika iyo meelaha kale ee Ingiriiska ku hadla.
Inta lagu guda jiro 1990-maadkii, waxay ku guuleysatay caan ka dib markii ay sii daysay dhowr albaabadood oo Ingiriis ah oo badan oo iibsanaya sida Falling to You (1996) iyo Let's Talk About Love (1997), labadoodaba labaduba waxay ahaayeen dheeman aqoonsi Maraykanka. Waxay sidoo kale dhalisay tiro is-gaarsiineed oo caalami ah, oo ay ka mid yihiin "Awoodda Jacaylka", "Marxaladda Labaad", "Sababtoo ah Waxaad I Laabtay", "Dhamaantiis Ayuu Igu Noqon Doonaa", "My Heart Will Go On", iyo "Anigu waxaan ahay Angel". Dion wuxuu sii waday sii-deynta fasaxyada Faransiis ee u dhexeeya rikoor kasta oo Ingiriis ah D'eux (1995) wuxuu noqday midka ugu badan ee lagu iibiyo gabayada luqadda Faransiiska ee waqtiga oo dhan, halka S'il Yaqiisto (1998), Sans 'Attendance (2012), iyo Encore un (2016) . Sannadkii 2000, Dion waxay ku dhistay sumcaddeeda inay noqotey mid aad uwanaagsan oo lagu noolaan karo oo leh Maalin Cusub ... ee Las Vegas Strip (2003-07), oo weli ah meesha ugu sarraysa ee ku salaysan xafladaha joogtada ah ee waqtiga oo dhan, iyo sidoo kale Kaalinta Aduunka Tour (2008-09), mid ka mid ah riwaayadaha ugu sareeya ee xafladaha oo dhan.
Muusikada Dion waxaa saameyn ku yeeshay jaangooyooyin ka kala yimid dhagax iyo R & B ilaa injiilka iyo casharka. Rikoodheeda waxay badanaa ku leedahay Faransiis iyo Ingiriis, inkastoo ay sidoo kale heeso ku qoran Spanish, Talyaani, Jarmal, Laati, Japanese iyo Mandarin Chinese. Inkasta oo ay sii deynsanaayeen inta badan waxay heleen soo dhaweyn culus, waxaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah codadka ugu saameynta badan muusikada. Dion wuxuu ku guuleystay shan abaalmarin ee Grammy, oo ay ku jiraan Album of the Year iyo Record of Year. Waa gabadha labaad ee ugu caansan haweenka Mareykanka intii lagu jiray xilligii Nielsen SoundScan. Sanadkii 2003, Dion waxaa sharfay Xiriirka Caalamiga ah ee Warshadaha Warshadaha (IFPI) ee iibinta in ka badan 50 milyan oo album oo Yurub ah. Dion wuxuu weli yahay fanaankii ugu fiicnaa ee Canadian-ka iyo mid ka mid ah fannaaniinta ugu badan ee iibiya markasta oo leh rekoor rikoodh oo ka badan 250 milyan oo nuqul oo adduunka
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Céline_Dion&oldid=182760"
Last edited on 15 Oktoobar 2018, at 13:20
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Oktoobar 2018, marka ee eheed 13:20.